Deeme: Sebenzisa izithombe namavidiyo ethu ukuxoxa nabangani | Izindaba zamagajethi
Yini indlela engcono kakhulu yokuxoxa nabantu oxhumana nabo? Akukhathalekile ukuthi sikhuluma ngokuba nomakhalekhukhwini noma umane nje sibe nekhompyutha yethu enesiphequluli sayo esijwayelekile, ngoba abantu abaningi bangazama ukuphendula lo mbuzo nge «I-Facebook Messenger«, Okuthile okuzwakala kuthakazelisa uma sicabangela ukuthi singakwazi ukukwenza ngohlelo lokusebenza oluhlukile oluvela kuwebhu uma sisebenzisa ikhompyutha yomuntu siqu neWindows.
I-Deeme uhlelo lokusebenza lweselula oluthuthukisiwe futhi olusanda kwethulwa ngalo ukuhambisana kwezinhlelo zokusebenza ze-Android ne-iOS, lapho esingaxoxa khona nabantu esixhumana nabo noma abangani bethu ngendlela ehluke kakhulu kunalokho okuvamile, inqobo nje uma zombili izinhlangothi (thina nabangane bethu noma oxhumana nabo) sifaka uhlelo lokusebenza lweselula olufakwe kumatheminali abo.
1 Izindlela ze-Deeme zokuxoxa nabangani
2 Thatha isithombe noma urekhode ividiyo ukuze uxoxe nabangane bethu
3 Okubi kokusebenzisa i- "Deeme" kumadivayisi wethu weselula
Izindlela ze-Deeme zokuxoxa nabangani
Uma sikhuluma ngokuqopha ividiyo ukuyithumela njengomyalezo kubangani bethu, abantu abaningi bangakucabanga lokho sikhuluma ngo-skype, Insizakalo yokuhlangana kwevidiyo ekhethwe yiMicrosoft leyo kufakwe iWindows Live Messenger kudala futhi lokho njengamanje, kungasetshenziswa ukwenza amakholi wevidiyo futhi, ukwenza thumela imilayezo eqondile ebhaliwe ngengxoxo ezijwayelekile noma futhi, ukurekhoda ividiyo esingayithumela koxhumana naye othile.
Okwamanje, asikhulumi nge-Skype nomsebenzi wayo wokuthumela umlayezo ngevidiyo eqoshiwe kepha kunalokho, uhlelo lokusebenza lweselula olubizwa «Deeme»Okuhambisana ne-Android ne-iOS njengoba kushiwo ngenhla. Okwenza lolu hlelo lokusebenza lweselula luhehe ku- indlela esizoxoxa ngayo nabangane bethu.
Thatha isithombe noma urekhode ividiyo ukuze uxoxe nabangane bethu
Phezulu sibeke ividiyo encane echaza kahle ukuthi sizokhuluma ngokulandelayo. Ngemuva kokufaka lolu hlelo lokusebenza, kufanele sithathe kuphela isithombe, esingahle sibe esinye se- «Selfie»Noma iyiphi indawo noma into esondelene kakhulu nathi. Leyo yingxenye ethakazelisa kunazo zonke, ngoba okuhlukile kusendleleni esizothumela ngayo isithombe noma isithombe.
Mayelana nokuthwebula kufanele bhala noma imuphi umyalezo esifuna ukuwabelana ngawo nabanye abangane, ukwazi ukuthi kamuva ukhethe uhlobo lwefonti yawo wonke lo mbhalo. Futhi sinethuba lokungeza imidwebo embalwa esinqunyelwe kusengaphambili, esingayithola nakanjani eyodwa ephathelene nalokho esifuna ukukusho kubangani bethu. Umlayezo ungathunyelwa ngaleso sikhathi koxhumana naye noma kumngani wethu, ngubani Uzoyithola njengoba siyihlelile inqobo nje uma unalolu hlelo lokusebenza lweselula olufakiwe kudivayisi yakho.
Singafinyelela isimo esifanayo ngevidiyo, sibe okuthile okuheha kancane ngoba kukhona inombolo ehlukile yezigcawu ongabelana ngazo nabanye abangane nalapho sizokwazi khona ukwengeza izinto ezifanayo esizishilo esigabeni esandulele. Njengezinye izinsizakalo zemiyalezo esheshayo, e- "Deeme" zonke izinkulumo zethu zizoqoshwa yileli hlelo emlandweni, esingazibuyekeza noma kunini lapho sifuna khona.
Okubi kokusebenzisa i- "Deeme" kumadivayisi wethu weselula
Abantu abaningi (futhi-ke, unjiniyela walolu hlelo lokusebenza lweselula) bacabanga ukuthi le ndlela enamaphuzu amaningi ivuna, ngoba isithombe sikhuluma ngaphezu kwamagama ayi-1000 futhi ikakhulu, uma sisebenzisa ividiyo ukuveza noma yiluphi uhlobo lomlayezo ongabelana nabanye abangane. Inkinga ingavela uma sinedivayisi yeselula enendawo encane yokugcina yangaphakathi, ngoba uma sijwayele ukuthumela imiyalezo ngobuningi kubangani bethu, lokhu kuzosho ukuthi indawo yokugcina yangaphakathi izogcwala ngokushesha ngoba le milayezo efanayo kuzofanele isindiswe kuyo izithombe noma amavidiyo esigungwini. Kulokhu, bekungeke kube lula ukusebenzisa uhlelo uma umakhalekhukhwini wethu unamandla amancane ngaphakathi, yize singakhetha susa wonke lo mlando ngezithombe ezisetshenzisiwe, noma nini lapho siphatha ukuqaphela ukuthi siphelelwa isikhala sokugcina sangaphakathi nganoma yisiphi isikhathi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » I-Deeme: Xoxa nezithombe zakho nezithombe ku-iOS